I-Photochemical smog: yintoni, iimpawu kunye neziphumo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | 13/07/2021 10:50 | Yendalo
Uphuhliso lwezoqoqosho kunye noshishino kwizixeko ezikhulu kubangela iingxaki zokungcoliseka komoya. Enye yeziphumo ebezingalunganga zoxinzelelo lweegesi zegreenhouse esixekweni umsi wephotochemical. Imalunga nongcoliseko lomoya ochaphazela kakubi impilo yethu ngenxa yokufumba kweegesi eziyingozi kwimeko-bume yesixeko.
Kule nqaku siza kukuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-photochemical smog, iimpawu zayo, indlela echaphazela ngayo impilo kunye nendlela yokunciphisa.
1 Yintoni ifogochemical smog kwaye iveliswa njani?
2 Iziphumo ezibi kwindalo esingqongileyo
3 Iziphumo ezingalunganga zempilo ye-photochemical smog
4 Ukunciphisa ungcoliseko
Yintoni ifogochemical smog kwaye iveliswa njani?
Umsi sisiphumo sokungcoliseka komoya okukhulu, ngakumbi umsi wokutsha kwamalahle, nangona ukwabangelwa kukukhutshwa kwegesi evela kumzi mveliso okanye kwimizi-mveliso nakwiimoto. Ngamanye amazwi, i-smog luhlobo lwelifu olubangelwa kukungcoliseka kwendalo, kuba ifana nelifu elimdaka. Igama lesiNgesi lifuna ukwenza isiqhulo ukunika le nkungu isiteketiso. Yaziwa njengomsi (umsi) kunye nenkungu (inkungu).
Ezona zinto zingcolisa umoya ezivelisa umsi zi-nitrogen oxides (NOx), ozone (O3), nitric acid (HNO3), nitroacetyl peroxide (PAN), hydrogen peroxide (H2O2). Zizinto ezihlanganisiweyo eziyinxalenye yeoksijini kwaye ezinye azitshiswanga, kodwa iihydrocarbons ezikhanyayo ezikhutshwa ziimoto njengoko benditshilo ngaphambili.
Enye into ebalulekileyo kukukhanya kwelanga, kuba ivelisa iiradicals simahla, ethi iqala inkqubo yemichiza eyenza eli lifu. Ngamanye amaxesha i-orenji ngenxa ye-NO2, kodwa kuyinto eqhelekileyo ukuba ingwevu. Omnye wemizekelo eyahlukileyo sisibhakabhaka se China okanye Japan.
Ukuqokelelwa kwale gesi ikhankanywe ngasentla kungunobangela wokuyilwa "kwamafu" afana nomsi. Xa udityaniswe noxinzelelo oluphezulu, umoya omileyo wenza inkungu endaweni yamathontsi amanzi. Ngamanye amaxesha, isibhakabhaka siyingozi. Oku kubizwa ngokuba yi-photochemical smog. Inokuthatha ubume bemvula eneasidi kunye nenkungu.
Iziphumo ezibi kwindalo esingqongileyo
Ngaphandle kwefuthe elibi kubume bembonakalo yomhlaba, zininzi iimpembelelo ezimbi kwindalo esingqongileyo. Umzekelo, iguqula ulwakhiwo lwe dessert iphela, njengongcoliseko lomoya ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ekuphuhlisweni kwendalo. Kuyancipha ngokumangalisayo ukubonakala. Xa sikwisixeko esinomsi omninzi weefotochemical umbono unokuncitshiswa ukuya kwishumi nje leemitha. Ukuncitshiswa kokubonakala ayisiyiyo tyaba kuphela, kodwa ikw nkqo, kwaye isibhakabhaka asinakubonwa.
Xa le nto ikho ngokugqithileyo ibangela amafu okanye isibhakabhaka esicacileyo. Akukho nobusuku buneenkwenkwezi. Ubona kuphela isigqubuthelo esimthubi, nezimvi zibe-orenji kuthi. Gcina ukhumbula ukuba enye yeziphumo ezibi kwindalo esingqongileyo lutshintsho kwimozulu yendawo efana notshintsho kulawulo lwemvula kunye nobushushu obonyukayo. Olu konyuka kwamaqondo obushushu luvela kwimitha yelanga evela kumphezulu weegesi kwaye ubuyele ngaphezulu. Isebenza njengeegesi zegreenhouse ezibuyisa imitha yelanga.
Kwelinye icala, imvula itshintshiwe kuba izinto ezingcolisayo kunye namasuntswana akumiswa kwekhabhoni abangela ukuhla kwemilinganiselo yemvula.
Iziphumo ezingalunganga zempilo ye-photochemical smog
Njengoko bekulindelekile, le nto ingcolisayo ikwanemiphumo emibi kwimpilo yabantu. Makhe sibone ukuba zeziphi iziphumo:
Abantu abahlala kwizixeko ezingcolileyo bahlala benomsindo emehlweni kunye nenkqubo yokuphefumla.
Abantwana kunye nabantu abadala ngabona basemngciphekweni ukongeza kubo bonke abantu abaneengxaki zemiphunga.
Ingabangela i-emphysema, i-asthma okanye i-bronchitis kunye nesifo sentliziyo.
Abantu abanezigulo ze-aleji banokuba mandundu ngenxa yokuba okusingqongileyo kulayishwe ngakumbi, kulungile kwiintsuku zemvula ukufaka ukungcola.
Ingabangela ukuphefumla okufutshane, umqala obuhlungu, ukukhohlela, kunye nokwehla kwamandla emiphunga.
Ibangela i-anemia ngenxa yoxinaniso oluphezulu lwekhabhoni monoxide ethintela utshintsho lweoksijini egazini nasemiphungeni.
Okokugqibela, kunokukhokelela ekufeni ngaphambi kwexesha.
Phakathi kwezixeko ezikhulu emhlabeni ezinelona nani liphezulu longcoliseko esinalo ILondon eye yahlupheka kakhulu kwixa elidlulileyo ngenxa ye-photochemical smog. Eminye imimandla ibiphucula ubulunga bomoya ngenxa yemimiselo eyahlukeneyo kunye neendawo ezingatshisiyo. Ndiyabulela koku, amashishini athile ayathintelwa ekusebenzeni kanye njengoko isithuthi besingavunyelwanga ukuba singene kwindawo yedolophu.
ILos Angeles sesinye isixeko esikhulu esinongcoliseko olukhulu. Ukuba ludandatheko olujikelezwe ziintaba kunzima ukuba igesi iphume. Okwangoku, ayikenzi kangako ukunciphisa inqanaba lokungcola.
Ukunciphisa ungcoliseko, oorhulumente kunye neenkampani ezinkulu kufuneka bavumelane. Kule nto kufuneka sixhase abemi kunye nendalo yethu. Le nto ingcolisayo ingalwelwa ngokwendalo ngokupheleleyo ngenxa yemvula nomoya ococa ubomi obutsha kunye nokugxeka iindawo ezingqongileyo. Kuya kufuneka unciphise ungcoliseko ukuze umoya ucoceke. Kuhlala kukho ukungcoliseka okungaphezulu kwiindawo apho kukho umoya omncinci kunye nemvula encinci. Konke oku kuguqulela kwinqanaba eliphezulu lokungcola.
Oorhulumente kunye nemibutho emikhulu banokwenza izigqibo zokunciphisa ukukhutshwa okungcolileyo kuba uninzi lwazo luveliswa yimizi-mveliso kunye nezityalo zeshishini Okokugqibela, abemi kufuneka benze kancinci ukusebenzisa imoto encinci, ukuthatha izithuthi zikawonke-wonke okanye ibhayisekile kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kombane. Kukho izimbo zomzimba ezilula kwimihla yethu njengoko zinjalo ukudala iindawo eziluhlaza ngakumbi, igadi ethe nkqo, okanye ukuya naphi na kusetyenziswa uthutho loluntu oluzinzileyo oko kunokusinceda sinciphise ngokukhawuleza ungcoliseko.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-smog, iimpawu zayo kunye neziphumo kwindalo esingqongileyo nasempilweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Umsi wemifanekiso
Ukuhlamba okuluhlaza: Yintoni le kwaye uyiqonde njani?